Hlunga nge: wadala Kwengezwe ngu
Armati Tshela wena okuphansi-Flow Shower zalapho: Izinhlobo, Izinzuzo kanye Izindleko
Kuthunyelwe ngu liu Shing
Low-ukugeleza zalapho ziye igunyazwe yi-National Energy Yemfihlo Mthetho. Low-ukugeleza zalapho anganikeza wayenomuzi nge Ukonga okukhulu futhi isilinganiso esimeme zilungiswe yakho noma ukwakhiwa project. Okuphansi ukugeleza zalapho ezifana zangasese, aerators isikulufu esiqiniselwe ekugcineni kwethumbu, futhi eshaweni amakhanda, anganikeza Umbuso indawo efanayo uma iqhathaniswa non-ephansi ukugeleza zalapho.
ukugeleza okuphansi abakhiqizi lwemidlalo ziyahlukahluka kubuchwepheshe babo ababezenza, Kodwa ungakwazi ukunikeza kodwa sathola imiphumela efanayo, futhi izindlela ezintsha isakhiwa ukuba kusetshenziswe ongaphakeme ukugeleza zalapho.
Flow okuphansi Shower Heads
Okuphansi ukugeleza eshaweni amakhanda yibo nge flow rate engaphansi kuka 2.5 GPM ngesikhathi ingcindezi amanzi 80 esingamakhilogremu ngamunye intshi square (psi). Nokho, muva nje ongaphakeme ukugeleza eshaweni amakhanda anganikeza ngisho ukugeleza rate engaphansi kuka 2.0 GPM. Izinhlobo ezimbili eziyisisekelo ukugeleza ongaphakeme eshaweni amakhanda yilezi:
Laminar-ukugeleza - Laminar-ukugeleza eshaweni ikhanda uyomenzela yamanzi futhi uyonikeza nge esinembile lokushisa nokulawula.
Aerating - Lolu hlobo lwe-ukugeleza ongaphakeme eshaweni ikhanda ngeke uhlanganise amanzi nge air ukwakha uhlobo inkungu yamanzi spray. Lokhu kuzodala nenani elikhulu umusi kanye umswakama, futhi ezindaweni ezinomswakama akunconywa.
Okuphansi ukugeleza eshaweni amakhanda kufanele esikhundleni asebekhulile ayakhelwe nge flow rate of 5.5 GPM.
Okuphansi Flow Toilets
Okuphansi ukugeleza izindlu zangasese kanye ultra-ongaphakeme ukugeleza zangasese siklanyelwe zisebenzisa uhhafu umthamo wamanzi temathoyilethi bendabuko. Okuphansi ukugeleza zangasese alinganiselwa 1.6 GPF, esikhundleni 3.5 GPF.
Umklamo ephansi ukugeleza zangasese bekulokhu ngaphansi umlilo ngenxa yesimangalo se ukuthi amanye model abakwazi ukukhipha ethoyilethi ngendlela ephumelelayo. amasu kwesikhathi nezindlu zangasese ukusebenza baye luthuthukiselwe impumuzo lezi zinkinga, futhi ziklanyelwe, iningi, ne nengxenye inketho ezishaywayo izibi liquid ukuhanjiswa egcwele okuqinile imfucuza.
Abaningi ongaphakeme ukugeleza zangasese nazo eklanyelwe ukwehlisa izinkinga clog ngoba amanzi abo ndima ebanzi.
Gravity-Fed okuphansi Flow Toilets - Lolu hlobo ongaphakeme ukugeleza yangasese esebenzisa isisindo evamile yamanzi ukusunduza phansi isitsha. Ishibhile futhi kancane ezinomsindo ukuthi ongaphakeme ukugeleza zangasese ingcindezi-basiza.
Ukucindezelwa-Wasiza okuphansi Flow Toilets - Lolu hlobo ongaphakeme ukugeleza yangasese ngokuvamile noisier kodwa kunganciphisa amanzi ukusetshenziswa 45% uma iqhathaniswa zangasese adonsela phansi ezikhuluphalisiweyo. Lolu hlelo lusebenzisa umfutho womoya bakhiwe phakathi ethangini ukuze ibenze amanzi phansi.
Kuthiwani Ngokubhoboza ompompi?
Old echibini ompompi kungabuye zokuchitha amanzi amaningi kanye nemali. Kufanele sicabangele esikhundleni ompompi yakho uma lisebenzisa ezingaphezu kuka 2.5GPM. Kunezinto ezimbalwa imibono ukuthi ungakhetha athathe isikhundla saleyo faucer yisikhathi. Ungakhetha ukuthi esikhundleni saso alethe isikulufu esiqiniselwe ekugcineni kwethumbu entsha, ngokuvamile nge esingaphansi 1.5GPM noma ngokufaka i aerator. I aerator noma ukugeleza restrictir kungaba ukungezwa cishe kunoma iyiphi isikulufu esiqiniselwe ekugcineni kwethumbu, ukuhlinzeka i ukuguqulwa lula futhi ezishibhile uyakukusindisa ezinye imali eminyakeni edlule.
Izindleko Izinzuzo Ukusebenzisa okuphansi Flow zalapho
Low-ukugeleza zalapho zabanye kungakuqinisa ngempela zidinga ezinye izindleko ezengeziwe sikubeke yokuzuza uma iqhathaniswa zalapho bendabuko.
Nokho, kusukela ngo-amakhodi amaningi wokwakha adinga ukuba ongaphakeme ukugeleza zalapho, siye sahlaziya kanjani izindleko kakhulu uyozuza lezi uhlobo zalapho banganezela isiphakamiso sakho ukwakhiwa. Kuye umenzi, yangasese eziyisisekelo kungadla phakathi $ 75 futhi $ 450, kuphela lwemidlalo. A ongaphakeme ukugeleza yangasese kalula abiza mayelana $ 100 ngaphezulu kuncike umakhi, kodwa payback leyo ikhasimende kungaba okushesha njengokungena iminyaka emithathu ngenxa yokulondoloza endleleni yokusetshenziswa kwamanzi.
Low-Flow zalapho Izinzuzo
Low-ukugeleza zangasese ungagcina ezingaphezu kuka 20,000 zamalitha amanzi ngonyaka ukuze ilunga lomndeni emine
Itholakala ukubhekana nezinto eziningi imibala nezitayela.
Kulawulwa-International Association of Plumbing and Mechanical Izikhulu (IAPMO)
Kumele ihlangabezane ezifanele American National Standards Institute (ANSI)
zangasese Water kahle ulondoloze imali amanzi uBill zakho zenyanga.
Armati Tshela wena Indlela Balungise Common Water Izinkinga isikulufu esiqiniselwe ekugcineni kwethumbu
ompompi amanzi sanamuhla baye baba eyinkimbinkimbi kakhulu, futhi umsebenzi kokufaka noma uxazulula lezi ompompi Sekunzima kakhulu. Inqubo yokufaka isikulufu esiqiniselwe ekugcineni kwethumbu kuqhathaniswa inqubo efanayo kodwa ubuchwepheshe lanamuhla kuletha izingxenye ezahlukene ukuthi udinga ukuqaphela.
Common isikulufu esiqiniselwe ekugcineni kwethumbu Izinkinga
Uma kade luxhunywe, ezinye izingqinamba okungase kuthinte ukusebenza isikulufu esiqiniselwe ekugcineni kwethumbu yakho, efana ukuvuza, squeaks nezinye izinkinga.
Ake ngiwele Ezindabeni ezithile ezivamile nendlela ukuzixazulula.
Okuphansi Water Kontanga
Ngokuvamile, ongaphakeme ingcindezi amanzi isikulufu esiqiniselwe ekugcineni kwethumbu kubangelwa sprayer yayo diverter. Valve diverter isiqeshana esincane esisogwini ngaphakathi emzimbeni isikulufu esiqiniselwe ekugcineni kwethumbu. I diverter elawula amanzi angena isikulufu esiqiniselwe ekugcineni kwethumbu, ngakho kumelwe uhlole ukuthi ahlanzekile-kungase avimbekile udoti encane namaminerali. Uma diverter akuyona avimbekile, kungase kudingeke ukuthi esikhundleni diverter.
Esinye isici ukuthi kungaba ibangelwa e ongaphakeme ingcindezi amanzi aerator. I aerator efana diverter zingase zihlanzwe ibhulashi futhi yokuhlanza isixazululo. Ungazama futhi ukusebenzisa uviniga ukususa izinto futhi unclog ke.
Ekugcineni, qiniseka ukuthi inkinga akuyona ingcindezi amanzi ephuma Umbuso indawo hlola ukuthi valve alondoloze nemithombo yamanzi avuliwe yonke indlela.
Futha Misting kusukela isikulufu esiqiniselwe ekugcineni kwethumbu
Uma amanzi izifutho kwakukhuphuka inkungu ngiwunqume ukugeleza main uma usebenzisa isikulufu esiqiniselwe ekugcineni kwethumbu, ungafuna ukuhlola ukuthi aerator is screwed ku uvalwe.
Sebenzisa indwangu noma ibhulashi ukususa amaminerali, tape noma imfucumfucu aerator, njengoba kungashiwo ivimbekile. Qiniseka futhi uhlole Washer aerator.
Faka aerator ubuye ukhangele njalo. Uma inkinga namanje uveza uzodinga esikhundleni aerator njengoba kungase aqhephukile noma ezilimele.
Isikulufu esiqiniselwe ekugcineni kwethumbu Yiphathe Ukuvuza
Lapho uthola ukuthi ukuvuza kwamanzi isikulufu esiqiniselwe ekugcineni kwethumbu, zama kokuqina nut nokupakisha at isibambo, njengoba lokhu kungaba imbangela eyinhloko ukuvuza.
Ngezinye izikhathi ezilimele O-ring idinga ukushintshwa.
Ukuze esikhundleni O-ring, vala umugqa amanzi, uqaqe isikulufu esiqiniselwe ekugcineni kwethumbu futhi esikhundleni igobolondo uma kunesidingo, kuye ngokuthi inkinga ukuthi ungafa. Lapho esikhundleni o-amasongo, ukuhlanza ingaphakathi itjhubhu futhi ngaphandle komzimba valve. Siphinde ukutusa lubricating itjhubhu o-amasongo ne amafutha abicah ezisekelwe.
Drips kusukela Spout
Enye inkinga ovamile uwukuthi drips kusukela itjhubhu isikulufu esiqiniselwe ekugcineni kwethumbu. Uma ufaka i-isikulufu esiqiniselwe ekugcineni kwethumbu kokucindezelwa isitayela, uzodinga esikhundleni Washer esihlalweni kanye / noma esikhundleni esihlalweni valve.
Ukuze zonke ezinye ompompi amanzi, uzodinga kuphela esikhundleni esihlalweni valve.
isikulufu esiqiniselwe ekugcineni kwethumbu Noises
Uma uzwa umsindo ngemuva ucisha isikulufu esiqiniselwe ekugcineni kwethumbu amanzi, kungaba amanzi isando. Lokhu kungase ingaxazululwa ngokufaka ekamelweni emoyeni.
Uma usuvele efakwe emoyeni emakamelweni, cisha amanzi cwenga umugqa amanzi bese uvula emanzini futhi. Lapho umsindo kwenzeka ngemva isikulufu esiqiniselwe ekugcineni kwethumbu amanzi sivuliwe, valve lingase lifune washer entsha, noma izingcindezi avela umugqa kungaba eliphezulu kakhulu noma eliphansi kakhulu.
Yiphathe isikulufu esiqiniselwe ekugcineni kwethumbu Nzima Usebenza
Ngokuvamile enzima ukuqhuba isibambo engase yenzeke ngoba inhlabathi noma udoti ziye zacekela igobolondo.
Imfucumfucu, metal izingcezu namaminerali angalimaza uphawu ngaphakathi igobolondo.
Ungase kudingeka esikhundleni igobolondo noma gcoba it ne amafutha abicah ezisekelwe. Ungayisebenzisi grade isikulufu esiqiniselwe ekugcineni kwethumbu amafutha plumber sika, Silicon izifutho noma iyiphi igrisi engaqukatha petroleum. uthambise Petroleum ezisekelwe bangase basabele ngezimpawu iraba angabanga isibambo kuba nzima nakakhulu ukuba isebenze.
Armati Fundisa wena Umhlahlandlela Indlela Khetha Right Plumbing Pipe
Kunezinhlobo eziningi amapayipi amaphayiphi izakhiwo zokuhlala noma commercial. Plumbing amapayipi ezifana PEX, Copper PVC asetshenziswa kuvamise kuye isicelo sabo futhi indawo lapho efakiwe. Ngaphezu kwalokho kukhona ezinye izinhlobo amapayipi ipayipi ezifana black, lashukumisa lethusi. Ake ubone ngezansi isicelo best for ezivamile ukusetshenziswa amapayipi amapayipi.
Engagqwali ipayipi. Photo Hans Pixabay
Insimbi engagqwali Ungabheka Lihle kakhulu kodwa expensive.Stainless kakhulu steel pipe asetshenziswa ezindaweni subject ukugqwala futhi eduze ezindaweni ezisogwini. Lolu hlobo ipayipi itholakala kokubili nezimo futhi eqinile Udzinga couplings ekhethekile ezizofakwa nezinye izinhlobo amapayipi. Musa ukudida engagqwali ngamapayipi ensimbi namapayipi lashukumisa. Itholakala ngobukhulu obuhlukahlukene ubude.
PEX amapayipi ezininginingi. Photo Makdesignbuild.com
Pex piping kuyinto piping nezimo plastic ukuthi sekuyinkinga Ukukhetha ethandwa izicelo ibhizinisi zokuhlala kanye ezincane. Nakuba lisetudlwana izindleko sokuqala, ukugcinwa yayo okuncane kanye okusheshayo yokufaka kwenza kube ipayipi engcono zokusabalalisa amanzi esakhiweni. PEX piping ihlinzeka ngempela ukuvuza khulula umnikelo umkhiqizo izinzuzo phezu zethusi piping. Omunye nemiphumela ethile engathandeki ebaluleke kakhulu wukuthi ngeke lisetshenziswe zokusebenza ongaphandle ngoba UV imisebe kungalimaza kuyinto ongaphandle plastic ungqimba.Okuningi
Piping yethusi Asetshenziswa Plumbing
ithusi Hlanza ngemva kokuba ukusika. Photo Cedarcityrecycling.com
amapayipi yethusi cishe iningi yendabuko amapayipi ipayipi ukusetshenziswa ngenxa isikhathi sabo olunzulu nokwethembeka. Zinikeza aphakeme ukugqwala ukumelana, impahla enkulu ukuze usetshenziselwe bamanzi ashisayo nabandayo, futhi kungalawuleka kalula. Nokho, isici esibaluleke kunazo ukucabangela ngaphambi kokusebenzisa zethusi piping ukuthi kufanele soldered ndawonye kungase kudinge nokufakwa ezengeziwe. Akuwona wonke umuntu kuyinto enhle ngesikhathi amapayipi zethusi nokunamathisela ngomthofu, kodwa isihloko Indlela solder Inqawe yethusi angakusiza.
PVC ipayipi. Photo publicworksgroup-Flickr
PVC amapayipi amapayipi asetshenziselwa ngamanzi abandayo kanye hot ahlanzekile kanye ne izicelo zangasese. PVC amapayipi ziyahlukahluka ku ukujiya yabo futhi ukumisa kuye isicelo lapho izosetshenziswa. Ngokwesibonelo, amapayipi amanzi ingcindezi, azifani njengoba amapayipi amapayipi, futhi akufani labo esetshenziswa ku isiphepho yamanzi. imikhiqizo amapayipi Plastic eyenzelwe izicelo amanzi ahlanzekile ngokuvamile esiqokiwe noma "NSF-PW" noma "NSF-61" esasiyobonisa ukuthi umkhiqizo siyahambisana imiphumela impilo NSF / ANSI Standard 6.
Lashukumisa Plumbing Inqawe
ipayipi lashukumisa. Photo Ikhaya Depot
piping lashukumisa yasetshenziselwa eminyakeni eminingana edlule njengendinganiso yazo amaphrojekthi zokuhlala. Nokho, ngokuhamba kwesikhathi isetshenziswa ngaphansi njalo ngoba nokugqwala ingakhula ibe nkulu ngaphakathi amapayipi amancane ubukhulu. Uma ipayipi esekhule ngokwanele, bese ungabona amanzi ivela isikulufu esiqiniselwe ekugcineni kwethumbu nokugqwala iminonjana njengoba esikalini kungaba kuqhephuke ingaphakathi ipayipi. amapayipi lashukumisa ingasetshenziswa ukuthutha grey amanzi noma amanzi non-ahlanzekile.
Brass Inqawe Asetshenziswa Plumbing
Brass amapayipi ngezinye izikhathi. Photo EugenesDIYDen Pixabay
Brass amapayipi amapayipi ukunikeza enkulu nokugqwala ukumelana piping, uma eyenziwe 67% kuya 85% yethusi. The best zethusi ipayipi grade eyatholakala lapho ingxubevange iqukethe 85% yethusi libizwa obomvu zethusi ipayipi. Brass piping ihlinzeka impahla ezimi njalo okungahambisani nokugqwala elingaphakathi futhi engenzi kubangela ngomshikisho ukulahlekelwa ngaphakathi ipayipi. Brass amapayipi amapayipi kukhona kulula uhala kuka ngamapayipi ensimbi futhi elihle kakhulu ashisayo-amanzi nokusatshalaliswa izinhlelo ezinkulu, ezifana futha nokufakwa, amathangi amanzi, nemithombo. Brass ipayipi ngokuvamile bavame ukuba uhlale isikhathi eside kunanoma isiphi impahla amapayipi ngezinye izikhathi. Brass ipayipi ngokuvamile iza 12-foot ubude iqonde.
Sakaza Iron Piping
Sakaza ipayipi yensimbi. Photo McWane, Inc.
Sakaza yensimbi amapayipi amapayipi ngokuvamile ekhiqizwa njengoba insimbi ne-spigot hlobo. Kungatholakala kubhalwe futhi nge emalungeni kochungechunge kodwa ayabiza kunamawashi insimbi nokukodwa spigot. Lezi amapayipi kukhona ngoyisiwula kusinda kunakho yimuphi omunye amapayipi, ngokuvamile esetshenziselwa ukusabalalisa nezinhlelo zamanzi, noma ukufakwa ngomshoshaphansi ngendlela ipayipi oyinhloko amanzi noma amapayipi izinhlelo. Usayizi kulencane ukuthi ngokuvamile okungukuthi silwenza kuyinto 4 "ipayipi, lalilikhulu ngokwanele ukuba sisetshenziswe ku izicelo zokuhlala. Sakaza yensimbi ipayipi sinzima futhi kufanele kusekelwe ngenkathi abuthe ngokuhlanganyela.
Armati Tshela wena Toilets: toilet Ukuthenga Guide Amathiphu
Temathoyilethi imishini ebaluleke ngempela esetshenziswa njalo futhi omunye izingcezu ukunganakwa kakhulu endlini yangasese. Abantu ngeke agxile kakhulu kubhavu noma ubuze kunokugxila ethoyilethi. Kunezinhlobo eziningi temathoyilethi, ezifana bendabuko, ezingeni eliphansi, emuva odongeni, udonga hung, nabanye abaningi. Kodwa kubalulekile ngempela ukwazi ukuthi akuzona zonke temathoyilethi zangasese ejwayelekile. Ngakho qiniseka ukuthi uyibheka yangasese ukuthenga yethu mhlahlandlela.
Toilet Ukuthenga Guide
Lo yangasese womhlahlandlela wokuthenga ukukusiza ngaphambi kokukuthenga yangasese wakho olandelayo. Ngakho qiniseka ukuthi:
Nquma ukuthi uzokhokhiswa usebenzisa kunye noma ezimbili ucezu yangasese
Indlu yangasese ekhethiwe kuyakuba kuhambisana nezinga lendawo
Khetha uhlobo ukufakwa
Kala isikhala esitholakalayo lapho ethoyilethi izofakwa
Lapho kungenzeka, zama ukuthenga yangasese kusuka igama uphawu
Nquma phakathi isiyingi noma side yangasese isitsha
Ngaphezu umhlahlandlela ukuthenga, futhi sicabangele lezi zici yangasese ebalulekile
Amanzi Saving- Ezinye zangasese, ingase ibe amanzi umqondo isitifiketi, high-ukusebenza kahle izindlu zangasese siwasebenzise nge 1.28 amalitha noma ngaphansi ezishaywayo ngamunye, njengoba kuqhathaniswa ne 1.6 zamalitha izindlu zangasese ezivamile.
Dual Flush- Ingabe ufuna ukukhetha yangasese ukuthi angakunika ikhono abe ezishaywayo ngokwengxenye ngoba uketshezi noma ukuhanjiswa egcwele kukadoti?
Toilet Bowl Height- Comfort zangasese ezibhekwa zokuzithumela non-bendabuko. Indinganiso isitsha usebe itholakala mayelana 15 amayintshi ngenhla phansi, kodwa zangasese imiganu at 17 amayintshi ezibhekwa yibo best. 17 A intshi ngisho 19 intshi yangasese isitsha ukuphakama beyoba kuhambisana baseMelika Abakhubazekile Mthetho.
Bowl shape- An isitsha side, nakuba ithatha isikhala esiningi, inikeza ngaphezulu isikhala zihlalo futhi ivumela amaphunga ezimbalwa ukuze aphunyuke. Thatha le libhekelele njengenhlangano isitsha side kungaba kuze kube 6 "isikhathi eside kunaleso endishini ejwayelekile.
One Piece ucezu Toilet- ababili zangasese kancane kunezindleko kunye kodwa bavame zanqwabelana uthuli phakathi ethangini kanye isitsha. zangasese One-ucezu ezibizayo futhi kungaba nzima ukufaka kuka yangasese ezimbili-piece. Kepha ukusebenza cishe okufanayo.
Flush Systems- Rubber flappers yizinto zesikhathi esidlule. Funa ezishaywayo kwemibhoshongo entsha futhi zinokwethenjelwa ezingaphezu kuka flappers ubudala. zangasese Ukucindezelwa-ukusiza maningi flushers amanzi kahle kuka zangasese adonsela phansi.
Valve- Hamba ngemva zangasese ukuthi babe okungenani 3 intshi ezishaywayo valve. zangasese Traditional abe 2 intshi valve ukuthi zilethwe wagxila esingaphansi amasha.
Rough-e Dimensions- Ibanga ukusuka udonga emuva emnyango umugqa amanzi kuhluka imodeli kukhombisa, ngakho buza ngaphambi kokuthi ufike yangasese yakho entsha.
Noise- Noise kungaba isici lapho yangasese wakho uzoba kufakwe eduze kwezindawo okusezingeni eliphezulu yezokuthutha.
Color- Ngaphezu 80 amaphesenti ekuhambeni ngemva ezimhlophe bendabuko, nakuba abantu abaningi kosuku ngalunye ozama imibala emisha angavamile.
Amanzi imigqa- Sebenzisa nezimo insimbi engagqwali amanzi imigqa esikhundleni ziqinile-chrome aluka zethusi imigqa.
Shut-Valiwe Valve- Kunezinhlobo eziningi uxhumano ngoba valve livaleke-off. Solder uxhumano kanye kokucindezelwa uxhumano kukhona esetshenziswa kakhulu, kodwa qiniseka ngokuthi ungenawo amapayipi ubudala yensimbi njengoba kungase kudinge uhlobo oluthile uxhumano ezahlukene.
Lawa phezulu abakhiqizi yangasese ukuthi ungathola e-US. Kuyoba zonke zincike izici odlule futhi yimalini iklayenti ukulikhokhela.
Toto-Toto ingenye 3 enkulu abakhiqizi yangasese
Kohler- Kohler inikeza imikhiqizo emihle kakhulu ngamanani ezifanele.
I-American Standard-Ngoba intengo okumsulwa, ethoyilethi ELINGCWELE kuyinto esincintisana ayakufanelekela.
Armati Fundisa wena ithawula Ibha Ukufakwa Ukuphakama Futhi Okunye Bath Izesekeli
Ithawula Ring futhi Okunye lokugeza Izesekeli Ukufakwa Heights
Yokugezela izesekeli ngokuvamile enye yezinto yakamuva ukufakwa lapho sivuselela noma ngesikhathi senqubo ukwakhiwa. Nokho, uma ungazi kanjani futhi kuphi ukufaka yokugezela izesekeli ke ungakwazi iyangena ezinkingeni ezinkulu njengoba ungabekwa Drilling phezu tile okubangela umonakalo by imishini ezingadingekile. Nazi ezinye zinobude Kunconywa ukuthi ungasebenzisa uma ufaka yokugezela izesekeli.
Khumbula ngaso sonke isikhathi ukuba uphinde uhlole nge-akhawunti yakho amakhodi wezakhiwo nemihlahlandlela ADA.
Eziningi zalezi eziphakeme Kunconywa ithathwe International zokuhlala Ikhodi (IRC), nezidingo amaMelika Abakhubazekile Mthetho futhi enyatheliswa National Ikhishi nokugeza Association.
Standard Mirror Ukufakwa Ukuphakama
Mirrors ingafakwa ezingeni ukuphakama ezahlukene kuye ngokuthi uhlobo esibukweni ezifakwayo. Yisiqondiso jikelele, babengabhekwa njengabagijimi efakwe phakathi 38 futhi 42 amayintshi. Lokhu nesilinganiso ihlobene ukuphakama phansi esibukweni, kukalwa kusukela sekugcineni phansi. Isincomo sami siwukuthi esibukweni ngeke ukukhwezwa ngosiko phansi ebusweni sibonakalisa akukho ephakeme kuka 40 amayintshi ngaphezu sekugcineni phansi. Ngezinye izikhathi ungase uthande phakath kwesibuko odongeni kuyize ngoba yobuhle. Kunconywa ukufaka olulodwa yobude obugcwele esibukweni Washroom ngamunye lapho okugeza izosetshenziswa nguwonkewonke.
Ukufakwa Ukuphakama for lokugeza Amashalofu
Amashalofu ezifakiwe ezindaweni eziphakeme ezahlukene kuye ngokuthi ukusetshenziswa kanye nohlobo eshalofini ezifakwayo. Ngokuvamile-ke ingafakwa phakathi 3 izinyawo futhi 4 izinyawo kakhulu, njengoba mirrors.However, lokhu ngeke ifane kuye ngohlobo zangasese futhi kukhona umkhuba omusha ukuba niches esikhundleni emashalofini.
Indlu yangasese Izesekeli Ukufaka: Soap Dish / Soap Idivaysi ekhipha
Indishi insipho kumele afakwe i-ukuphakama okucishe 44 amayintshi noma njengoba eliphezulu 54 amayintshi. Insipho isidlo ukuphakama indawo kufanele akhiwe uvela spray eshaweni. Ngenkathi dispenser insipho kufanele sifakwe okungenani 40 amayintshi futhi uphakeme njengesakhiwo 48 amayintshi. Kungakuhle isidlo insipho kufanele afakwe ngesikhathi 48 amayintshi; Nokho, uma kungcono dispenser insipho, push yabo izinkinobho kufanele zitholakale 44 "esiphezulu ngenhla FF.
Ithawula Ring Ukufakwa Ukuphakama
I ring ithawula kumele afakwe phakathi 50 amayintshi futhi 52 amayintshi ukuphakama, kukalwa kusukela sekugcineni phansi. Uma sokusikala kusukela kuyize-ke kuyinto liyakushunyayelwa hung 20-22 amayintshi ngenhla ke. Ngokuvamile, ngokuphelele ukuphakama obuncane 36 "ngoba amathawula, 18" ngoba ukugeza izindwangu kukalwa kusukela usule kuyize.
Ukufakwa ukuphakama ithawula wesitimela kuzohluka kuye ngohlobo kanye nokusetshenziswa yokugezela. I wesitimela ngeke zifakwe ngesikhathi ibambene efanayo lapho yokugezela izosetshenziswa izingane. A ithawula wesitimela kufanele afakwe 48 amayintshi ukusuka phansi enhlabathini. Ufuna ukuhlola futhi indawo Izitolo kagesi kanye zokuhlobisa umsebenzi tile. Uma ufaka amaningi ithawula komzila, ukukala lowo kuyoba eliphakeme, bese ugoba ithawula ngaleso ezingeni.
Mark 2 intshi angu ngaphansi endaweni lapho phansi ithawula nokuthi kufanele kube indawo ukufaka wesitimela yesibili.
Toilet Paper Roll Umnikazi Ukuphakama?
I-toilet paper roll umnikazi ingafakwa phakathi 19 futhi 26 amayintshi ukusuka phansi. AbaseMelika Abakhubazekile Mthetho eyokukhuthaza ukuba uqhubeke usebenzisa 19 amayintshi ngenkathi National Ikhishi nokugeza Association uncoma 26 amayintshi njengoba ukuphakama ekahle. Uma ungenalo eningi isikhala, ungase uthande ukucabangela uhlu lwezimpahla yona ohlangothini kuyize.
Indlu yangasese Izesekeli Ukufaka: Cabinet
Indlu yangasese amakhabethe ngokuvamile efakwe 54 amayintshi ngenhla phansi eseqedile. Lokho kungenxa yokuthi ngokuvamile kuyomelwe 36 amayintshi kuyize ejwayelekile plus 18 amayintshi isikhala osobala phakathi. Ngezinye izikhathi inhlanganisela esibukweni / iKhabhinethi ikhethwa ngakho qiniseka ukuba efakwe 12 amayintshi phezu usule.
Indlu yangasese Izesekeli Ukufaka: Thatha Libhala
Thatha Amabha kufanele ibekwe okungenani 33 "-36" ukusuka phansi enhlabathini. Lapho ukufakwa usodongeni ohlangothini sokudonsa ibha kuyakuba 42 amayintshi okungenani eside, elise 12 amayintshi esiphezulu kusukela kususwa udonga lwangemuva nokwelula 54 amayintshi ukusuka wall.There ezingemuva ulwazi olwengeziwe mayelana nendlela ukufaka sokudonsa ibha, njengoba batusa baseMelika Abakhubazekile Mthetho e-athikili yethu emayelana Bamba nemigoqo.
Ukufakwa Ukuphakama for Hand dryers
Hand dryers babe ezinye iziqondiso eziqondile njengoba kufanele bakwazi ukuba eziqhutshwa kalula ngokusebenzisa ubuncane amayunithi force.These kuphela uzahlangana ethize ADA Ubukhulu maqondana engakanani bangakwazi aphume ashone futhi kufanele kube kusuka umbala okungafani. Inkinobho push kufanele afakwe ngesikhathi 38 amayintshi ngenhla FF okungenani isikhala phansi ecacile 30 "x 48" phambi them.When isandla ezingaphezu kweyodwa dryer ifakiwe, iyunithi yesibili ingafakwa phakathi 42 "-48" ngenhla phansi esiphelele.
Fundisa Armati wena Indlela Refinish kubhavu
Buyekeza yakho yokugezela ngokuqala kabusha ngopende on ubhavu.
Ake Nature e With Shower Outdoor
izihlambi Outdoor akuzona nje for ZOKUBHUKUDA namabhishi umphakathi manje. Akhiwe okusheshayo abe ngaphezu kokushiwo abathengisi abakhangisa ngokuthi kwansuku ikhaya yokugezela.
Armati Fundisa wena I-Anatomy of kubhavu futhi Indlela Faka yomiselela
Funda konke mayelana nakubhavu kuhlanganise nendlela ukususa eyodwa.
Fundisa Armati wena Indlela Faka i Anti-nyobula Valve
Misa okungazelelwe lokushisa lamanzi eshaweni izinguquko ngokufaka i-valve anti-ukuyobula e eshaweni yakho.
Fundisa Armati wena Indlela Faka Shower Corner
Lokhu compact okwamanje stylish eshaweni ikhithi kungaba iskhala endaweni okugeza encane.